Dooni Shixnad Hub U Sida Al-shabaab Oo Ka Degtay Xeebaha Puntland | Araweelo News Network (Archive) -
Dooni Shixnad Hub U Sida Al-shabaab Oo Ka Degtay Xeebaha Puntland
Aden(ANN)Dooni shixnad hub ah u sida kooxda Al-shabaab, ayaa kasoo shiraacatay xeebaha dalka Yamen todobaadkii tegey. Kadib markii ay Doonidaa oo ay Al-Qaidada Yamen ee lagu magcaabo Ansaaru shareeca ay maalintii
Jimcihii ee todobaadkan Doonidaa oo sida hub noocyo kala duwan ah usoo direen dhinaca xeebaha puntland si loo gaadhsiiyo kooxda Al-shabaab ee ka dagaalnta Koonfurta Somalia.
Sidaana waxa laga soo xigtay warar saraakiisha dhinaca amaanka ee dalka Yamen, oo ay heshay shebekada Araweelonews, iyadoo mudooyinkii u danbeeyay ay Al-qadiada Yamen ee Ansaaru Shareeca iyo Ciidamada dalka Yamen dagaalo ku dhexmarayeen deegaamo ka tirsan dalka Yamen gaar ahaan deegaanada Koonfurta ee dhinaca magaalada Istiraatiijiga ah ee Cadan u dhow.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay ku jiraan hubkaa gantaalaha Roket loo yaqaan iyo hub kale oo laga iibsaday Ciidamada badda ee Yamen oo ay ku jiraan waxyaabaha loo adeegsado qaraxyada.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayay ciidamada Yamen xabsiga u taxaabeen kooxo Soomaali ah, kuwaas oo ay sheegeen in looga shakiyay inay xidhiidh la leeyihiin kooxda Al-shabaab iyo Ansaaru Shareeca oo ka dagaalanta Yamen.
Dhinaca kale shebekada Al-Jazira ayaa lagu baahiyay in sodoneeyo Soomaali ah oo sita qorayaha cul-culus ee RPG lagu arkay deegaanka Makula ee dhinaca koonfurta Yamen.
March 2012, ayay dawladda Yamen sheegtay inay dalkeeda soo galeen in kabadan 300 oo malayshiyada Al-shabaab ee ka dagaalanta Somalia, kuwaas oo doonaya inay gacan siiyaan kooxda Ansaaru Shareeca ee dagaalka kula jira ciidamada Yamen.
Dhinacakale marar badan ayay kooxaha ka dagaalama Somalia hub sidan oo kale kasoo iibsadeen dhinaca dalka Ertria iyo Yamen sanadihii 2010 iyo 2011 ayay doonyo sida shixnado hub ah marar kala duwan ku xidhteen xeebaha dhinaca Puntland.